Wednesday October 04, 2017 - 12:40:40 in Wararka by Super Admin
Stephen Paddock oo 64 Jir ayaa fuliyay weerarkii las Vegas
Saraakiisha ammaanka Mareykanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen haweenaydii uu qabay Stephen Paddock oo ahaa Ninkii dadka badan ku laayay magaalada Las Vegas islamarkaana ay su’aalo weydiinayaan.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa saraakiil katirsan FBI-da ayaa faafisay in wax badan aysan usoo kordhin doonin su’aala weydiinta xaaska Stephen Paddock maadaama aysan falka waxba ka ogeyn islamarkaana ay qarracantay markii uu seygeeda dadka laayay.
Qoys daris la ahaa dilaaga ayaa iyana dambi baarayaasha u sheegay in uu ahaa Nin Khamriga si aad ah ucabi jiray islamarkaana heystay diinta Nasaarada ama Kirishtanka waxaana beenoobay warar soo baxay oo sheegayay in Stephen uu bilo ka hor islaamay.
Shirkad hubka sameysa oo xarunteedu tahay gobolka Florida ayaa FBI-da u sheegtay in muddo 30 sana ah uu la shaqeynayay waloow markii dambe uu noqday howlgab heystay sharciyada duulinta diyaaradaha iyo kaxaynta gaadiidka.
Eric Paddock oo ay walaala yihiin ayaa warbaahinta u sheegay in walaalkii Sephen uu ahaa Nin marwalba ku lug lahaa arrimo qaras ka xoornimo ah sida isagoo khamaar gelin jiray hantidiisa islamarkaana lacago kumanaan kun oo dollar ah ku waayi jiray "aadbaan uniyad jabay kadib markii walaalkeey uu dad badan laayay, runtii waan uga digi jiray ku lug lahaashiyaha falalka qaras ka xoornimada ah, dabcan wax aan sheegno ma naqaan oo aan ka aheyn in aan lamurugoono dadkii uu laayay” sidaas waxaa yiri Eric Paddock.
FBI-da waxay meesha ka saartay dhammaan tuhunada ah in uu Ninkii fuliyay weerarkii Las Vegas uu ahaa muslim iyadoo soo bandhigtay caddeymo ah in Stephen Paddock uu aadi jiray Kaniisadaha sidoo kalane wuxuu qabatimi jiray khamriga iyo daraagiska xitaa maalmihii ugu dambeeyay ka hor intii uusan weerarka fulin ayuu si caadi ah khamri ugu isticmaalayay Hotelka Mandalay Bay.
Natiijooyinka hordhaca ah ee baaritaanka kasoo baxay waxaa kamid ah in qolkii uu ka deganaa Hotelka iyo gurigiisa intaba lagasoo helay tobaneeyo qoryo gacmeed iyo rasaas aad u farabadan, waxayna baarayaashu sheegayaan in Stephen Paddock uu weerarka si heer sare ah uqorsheeyay oo uu waqti hore diyaarsaday qoriga ugu shish-ka wanaagsan hubkii uu heystay, sidoo kale Kaamirooyin ayuu ku rakibtay goobtii uu weerarka ka fuliyay.
Stephen Paddock wuxuu ahaa xisaabiye howlgab ah oo lacagtii uu heystay badankeed ku bixiyay khamaar iyo hub iibsasho, dadka yaqiin waxay leeyihiin sanadadii dambe wuxuu u dhaqan ekaa nin maskaxda looga jiro waloow si caadi ah uu ula noolaa asaxaabtiisa.
Dowladda Mareykanka waxay diiday in kiiska dambigan ay ku tilmaamto ‘Fal Argagaxiso’ maadaama qofka fuliyay uu ahaa Kirishtan balse haddii qofkaas uu ahaan lahaa Muslim ayay saraakiisha mareykanka ku sumadeyn lahaayeen fal ‘Argagaxiso’.
Malaayiin qof Mareykan ah ayaa baraha bulshada ku faafiyay sawirro argagax leh oo banaanka soo dhigaya gummaadkii ka dhacay xarunta Musigga magaalada Las Vegas.
Dhimashada ayaa illaa iyo hadda caga cageynaysa 59 halka dhaawacu gaaray 515 qof, weerarkii las Vegas ayaa noqday midkii ugu xumaa ee soo mara dadka Mareykanka marka laga hadlayo toogashooyinka maxalliga ah ee ay fuliyaan dad Kirishtaanka ah.
illaa iyo hadda lama hayo Riwaayad ka madax banaan Riwaayadaha FBI-da oo ku aaddan waxa uu salka ku haayay weerarka uu Ninkan caddaanka 64 jirka ahaa ku qaaday magaalada Las Vegas.